Ny fanalahidin 'ny nihazakazaka lehibe fanandramana no mitondra ny miova vola ho aotra. Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia automatique sy nanaovany fanandramana mahafinaritra.
Hafanàm-po an fanandramana afaka manana vola be hafa rafitra ary izany dia manome fahafahana ho mpihazakazaka mpikaroka fanandramana izay azo tamin'ny lasa. More manokana, fanandramana ankapobeny manana karazana roa lehibe ny vola: raikitra ny vola lany sy ny vola lany miova. Raikitra fandaniana ireo vola lany izay tsy miova arakaraka ny isan'ny mpandray anjara ianao. Ohatra, ao amin'ny laboratoara fanandramana, raikitra mety ho vola lany ny vola lany amin'ny fanofana toerana sy nividy ny fanaka. Variable vola lany, amin'ny lafiny iray hafa, fiovana arakaraka ny isan'ny mpandray anjara ianao. Ohatra, ao amin'ny laboratoara fanandramana, miova ho tonga ny vola lany amin'ny fandoavana ny mpiasa sy ny mpandray anjara. Amin'ny ankapobeny, dia manana fanandramana Analog ambany raikitra vola lany sy ny vola lany avo miova, ary nomerika fanandramana manana raikitra vola avo sy iva miova vola lany (Sary 4.18). Amin'ny mety famolavolana, dia afaka handroaka ny miova vola lany ny andrana ny lalana rehetra ho aotra, ary mampientam-po izany dia afaka mamorona fikarohana fahafahana.
Sary 4.18: Schematic ny vidin'ny trano amin'ny Analog sy dizitaly fanandramana. Amin'ny ankapobeny, dia manana fanandramana Analog ambany raikitra vola lany sy ny vola lany avo miova kosa nomerika fanandramana manana raikitra avo vola lany sy ny vola lany ambany miova. Ny fandaniana isan-karazany rafitra midika fa fanandramana dizitaly afaka mihazakazaka amin'ny ambaratonga izay tsy azo atao amin'ny Analog fanandramana.
Misy singa roa lehibe ny miova vidim-fandoavam-bola ny mpiasa sy vola ny mpandray anjara-ary ny tsirairay avy ireo dia afaka ho voataona ianao aotra mampiasa tetika samihafa. Fandoavam-bola ny Staff SAMPA avy ny asa fikarohana no mpanampy mpilatsaka mpandray anjara ary hanolotra fitsaboana, ary mirefy vokatra. Ohatra, ny Analog fanandramana ny Schultz saha sy ny mpiara-miasa (2007) eo amin'ny ara-tsosialy sy ny herinaratra fampiasana fenitra takiana fikarohana mpanampy ny handeha ho any an-trano tsirairay mba hanafaka ny fitsaboana ary vakio ny herinaratra metatra (Sary 4.3). Izany rehetra izany amin'ny alalan'ny fikarohana mpanampy ezaka midika fa ny fanampiana ny tokantrano vaovao ho amin'ny fianarana mety ho nanampy ny vidiny. Etsy an-danin'izany, fa ny saha nomerika fanandramana ny Restivo sy van de Rijt (2012) eo amin'ny valisoa in Wikipedia, mpikaroka afaka hanampy bebe kokoa saika mpandray anjara amin'ny tsy misy vidiny. Ny ankapobeny miova paikady ho fampihenana saram-panjakana dia ny manolo ny asa olombelona (izay lafo be) amin'ny solosaina ny asa (izay mora vidy). Teny mafy, dia afaka manontany tena ianao hoe: afaka izany fanandramana hihazakazaka raha mbola eo an-tanako fikarohana rehetra ekipa no matory? Raha eny ny valiny, ianao efa nanao asa lehibe ny automatique.
Ny faharoa lehibe miova karazana vola dia fandoavam-bola ny mpandray anjara. Misy mpikaroka nampiasa Amazon Mechanical Turk sy ny asa an-tserasera hafa tsena mba hampihenana ny fandoavam-bola izay ilaina ho an'ny mpandray anjara. Mitondra fiara miova vola lany rehetra ny lalana mankany amin'ny aotra, na izany aza, fomba hafa no ilaina. Nandritra ny fotoana ela, mpikaroka no natao fanandramana izay dia mankaleo tsy maintsy mandoa ny olona mba handray anjara. Fa, ahoana raha afaka mamorona ny fanandramana fa ny olona te-ho in? Izany Mety ho toa lavitra naka, fa homeko anao ny ohatra etsy ambany avy ny asa, ary misy ohatra hafa ao amin'ny Loha 4.4. Mariho fa io fomba fampianarana mahafinaritra fanandramana dia manamafy ny sasany amin'ireo lohahevitra ao amin'ny Toko faha-3 momba nanaovany fanadihadiana mahafinaritra kokoa sy tao amin'ny Toko faha 5 momba ny famolavolana ny faobe fiaraha-miasa. Noho izany, heveriko fa ny mpandray anjara fifaliana-izay mety ihany koa ny hatao hoe mpampiasa traikefa-dia ho miha ampahany manan-danja ny fikarohana nanaovana ao amin'ny taona nomerika.
Table 4.4: Ohatra ny andrana amin'ny zero ny miova vidiny izay Mahazo valisoa sarobidy mpandray anjara amin'ny asa fanompoana na ny mahafinaritra traikefa.
Website amin'ny ara-pahasalamana vaovao Centola (2010)
Manaova ny fandaharana Centola (2011)
Free mozika Salganik, Dodds, and Watts (2006) , Salganik and Watts (2008) , Salganik and Watts (2009b)
Fun lalao Kohli et al. (2012)
Movie tolo-kevitra Harper and Konstan (2015)
Raha te-hamorona aotra miova vola lany fanandramana ianao te mba ho azo antoka fa tanteraka ny zavatra rehetra mandeha ho azy sy ny mpandray anjara tsy mitaky misy fandoavam-bola. Mba hampisehoana ny fomba azo atao izany, aho dissertation mamaritra ny fikarohana momba ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana ny vokatra ara-kolontsaina. Ity ohatra dia mampiseho ihany koa fa ny vola lany aotra miova antontan-kevitra dia tsy nanao zavatra mora vidy kokoa. Kosa, dia ny manampy fanandramana izay mety tsy ho azo atao raha tsy izany.
Ny dissertation dia atosiky ny amin'ny loatra ny maha-fahombiazana ho an'ny vokatra ara-kolontsaina. Hit hira, tsara indrindra mivarotra boky, sy ny sarimihetsika dia be ireny horonantsary malaza ireny, mainka mahomby noho ny eo ho eo. Noho izany, ny tsena ho an'ny vokatra ireo dia matetika antsoina hoe "Mpandresy-handray-rehetra" tsena. Na izany aza, tamin'izany andro izany, izay manokana hira, boky, na ny horonan-tsary ho fahombiazana dia mampino ampoizina. Ny screenwriter William Goldman (1989) ski namintina maro akademika fikarohana ka nilaza fa, raha ny amin'ny mialoha fahombiazana, "tsy misy mahalala na inona na inona." Ny unpredictability ny mpandresy-handray-rehetra tsena nahatonga ahy hanontany tena hoe hatraiza ny fahombiazana dia vokatry ny kalitao sy ny vintana be fotsiny. Na, naneho fomba hafa kely, raha afaka mamorona tontolo mirazotra ary asaivo nivoatra tsy miankina rehetra, dia ny mitovy hira malaza ho amin'ny isan-izao tontolo izao? Ary, raha tsy izany, inona no mety ho ny rafitra izay mahatonga ireo fahasamihafana?
Mba hamaliana ireo fanontaniana ireo, isika-Peter Dodds, Duncan Watts (ny dissertation mpanolotsaina), ary I-nihazakazaka andianà-tserasera an-tsaha andrana. Indrindra, ka afaka nanorina ny tranonkala antsoina hoe MusicLab ny olona izay afaka mahita hira vaovao, ary nampiasa azy io ho ny andiam-andrana. Izahay nanakarama mpandray anjara amin'ny alalan'ny dokam-barotra mandeha tsy ampy amin'ny zatovo-liana tranonkala (Sary 4.19) ary amin'ny alalan'ny haino aman-jery milaza ao amin'ny. Mpandray anjara tonga any am-tranonkala nanome fahalalana ampy fanekena, nahavita fohy fanontaniana fototra, ka tsapaka notendrena ho iray amin'ireo toe-javatra roa fanandramana-mahaleo tena sy ara-tsosialy hery mitarika. Amin'ny toe-javatra tsy miankina, mpandray anjara nanao fanapahan-kevitra momba izay hira mba hihaino, nomena afa-tsy ny anaran 'ny fatorana sy ny hira. Raha nihaino ny hira, ireo mpandray anjara dia nangataka mba fanasokajiana azy rehefa izay dia nanana fahafahana (fa tsy ny adidy) mba télécharger ny hira. Ao amin'ny fiaraha-monina toe fitarihana, mpandray anjara nanana traikefa toy izany koa, raha tsy afaka koa ny nahita hoe impiry hira tsirairay efa alaina ny mpandray anjara teo aloha. Ankoatra izany, ny mpandray anjara ao amin'ny fiaraha-monina ireo hery mitarika toe-tsapaka notendrena ho iray amin'ireo valo mirazotra tontolo tsirairay avy izay nivoatra tsy miankina (Sary 4.20). Mampiasa izany famolavolana, dia nihazakazaka fanandramana roa mifandray. Ao amin'ny voalohany, dia nanolotra mpandray anjara ny hira amin'ny unsorted Grid, izay nanome azy ny malemy famantarana ny lazany. Ao amin'ny faharoa fanandramana, dia nanolotra ny hira ao amin'ny laharana lisitra, izay nanome famantarana matanjaka be ny lazany (Sary 4.21).
Sary 4,19: Ohatra amin'ny Zavatra tsy ampy dokam-barotra fa ny mpiara-miasa ary aho taloha handray mpandray anjara noho ny MusicLab fanandramana (Salganik, Dodds, and Watts 2006) .
Sary 4.20: andrana famolavolana ny MusicLab fanandramana (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ireo mpandray anjara dia tsapaka voatendry ho ao amin'ny anankiray fepetra roa: tsy miankina sy ara-tsosialy hery mitarika. Ireo mpandray anjara ao amin'ny toe-javatra tsy miankina nanao ny safidy tsy misy vaovao mikasika ny zavatra hafa nataony. Ireo mpandray anjara ao amin'ny fiaraha-monina fitarihana toe dia tsapaka voatendry ho ao amin'ny anankiray valo mifanitsy tontolo, izay nahita ny lazany-araka ny refesina amin'ny alaina ny teo aloha mpandray anjara-ny tsirairay hira ao amin'ny tontolo izao, fa tsy afaka nahita vaovao, ary tsy izy ireo mihitsy aza mahalala ny momba ny fisian'ny, akory va ny tontolo hafa.
Hitanay fa ny lazan'ny ny hira nitovy manerana ny tontolo milaza toerana lehibe ny vintana. Ohatra, ao amin'ny tontolo iray ny hira "Lockdown" amin'ny 52Metro tonga 1, sy izao tontolo izao iray hafa dia tonga tamin'ny faha 40 amin'ny 48 hira. Izany no hira mitovy mifaninana nataony manodidina ny hira ihany, fa ao amin'ny tontolo iray dia nahazo tsara vintana sy ny hafa dia tsy. Ankoatra izany, amin'ny alalan'ny mampitaha vokatra manerana ny fanandramana roa no nahita fa mitondra ho amin'ny fitarihana ara-tsosialy mitovy kokoa fahombiazana, izay mety miteraka ny endriky ny predictability. Nefa, mijery manerana ny tontolo (izay tsy azo atao any ivelany izany karazana tontolo mirazotra andrana), dia nahita fa ny fitarihana ara-tsosialy tena nampitombo ny unpredictability. Ankoatra izany, mahagaga, dia ny hira amin'ny antso avo indrindra izay manana ny tena ampoizina vokatra (Sary 4.22).
Sary 4,21: sary avy amin'ny toe-piainana ara-tsosialy hery mitarika ao amin'ny MusicLab fanandramana (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ao amin'ny fitarihana ara-tsosialy ao amin'ny andrana toe 1, ny hira, miaraka amin'ny isan'ny alaina teo aloha, dia natolotra ho an'ny mpandray anjara fandaharana amin'ny 16 X 3 mahitsizoro Grid, izay ny toerana ny hira tsapaka ireo voatendry ho an'ny mpandray anjara tsirairay. Ao amin'ny andrana 2, mpandray anjara eo amin'ny ara-tsosialy toe fitarihana dia naseho ny hira, amin'ny Download fanisana, aseho amin'ny tsanganana iray ao nidina mba ny lazany amin'izao fotoana izao.
Sary 4,22: Vokatra avy amin'ny MusicLab fanandramana mampiseho ny fifandraisana misy eo amin'ny antso sy ny fahombiazana (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ny x-mpiray dia ny tsena anjara amin'ny fihirana izany teo tsy miankina izao tontolo izao, izay manompo ho toy ny ohatry ny antso ny hira, sy ny Y-mpiray dia ny tsena anjara izany fihirana izany teo 8 ara-tsosialy fitarihana izao tontolo izao, izay manompo ho toy ny ohatry ny fahombiazan'ny ny hira. Hitanay fa ny fampitomboana ny ara-tsosialy izay mpandray anjara fitaoman-niaina manokana, ny fiovana eo amin'ny fisehon'ny avy andrana 1 mba hanandrana 2 (Sary 4.21) -caused fahombiazana ho tonga bebe kokoa ampoizina mihitsy, indrindra fa ny ambony indrindra antso hira.
MusicLab Afaka mihazakazaka amin'ny aotra indrindra miova vola lany noho ny lalana fa nisy namorona. Voalohany, ny zavatra rehetra dia tanteraka automated izany no afaka mihazakazaka raha mbola natory. Faharoa, ny onitra dia maimaim-poana mozika ka tsy nisy miova mpandray anjara vola fanonerana. Ny fampiasana ny mozika toy ny onitra ihany koa ny mampiseho ny fomba misy indraindray ny varotra-eny raikitra eo ny vola lany sy ny vola lany miova. Nampiasa mozika raikitra nampitombo ny vola lany satria tsy maintsy mandany fotoana fiarovana alalana ny fatorana sy ny fanomanana ny tatitra ho an'ny mpandray anjara ny fatorana momba ny 'fihetsika ny mozika. Nefa, amin'ity tranga ity, mitombo raikitra vola mba hampihenana hiovaova vola lany no zavatra tsara tokony hatao; izany no nanome fahafahana anay mba hihazakazaka fanandramana izay tokony ho 100 heny noho ny fitsipika lehibe kokoa laboratoara fanandramana.
Ankoatra izany, ny MusicLab fanandramana dia maneho fa zero ny vola lany miova tsy voatery ho ny farany ho azy; fa, mety ho fomba vaovao nihazakazaka karazana andrana. Mariho fa tsy nampiasa ny mpandray anjara rehetra mba mihazakazaka ny fitsipika ara-tsosialy laboratoara fiantraikany fanandramana in-100. Kosa, dia nanao zavatra hafa, izay afaka mieritreritra ny ho avy ny ara-tsaina ara fanandramana ny piarahamonina fanandramana (Hedström 2006) . Tsy mifantoka amin'ny fanapahan-kevitra tsirairay, dia mifantoka ny andrana amin'ny lazan'ny, nisy iombonana vokany. Io jiro ny vokatra iombonana nidika fa ilaina ny 700 ireo mpandray anjara mba hamokatra iray angon-drakitra teboka (nisy 700 ny olona isaky ny mifanitsy tontolo). Izany mizana dia tanteraka noho ny vola lany firafitry ny fanandramana. Amin'ny ankapobeny, raha ny mpikaroka te-hianatra ny fomba vokatra iombonana mipoitra avy amin'ny fanapahan-kevitra tsirairay, vondrona fanandramana toy ny MusicLab dia tena mahafinaritra. Tamin'ny lasa, dia efa logistically sarotra, fa ireo olana ireo mihamalazo noho ny mety hisian'ny aotra miova vidiny rakitra.
Ankoatra ny mampiseho ny soa azo avy amin'ny aotra miova vola rakitra, ny MusicLab fanandramana ihany koa ny mampiseho ny fanamby amin'ny fomba ity: avo raikitra vola lany. Raha ny tranga, tena tsara vintana aho mba ho afaka miasa amin'ny manan-talenta developer vohikala antsoina hoe Peter Hausel nandritra ny enim-bolana mba hanorina ny fanandramana. Izany dia tanteraka noho ny mpanolotsaina, Duncan Watts, nahazo maromaro atolotry mba hanohanana io karazana fikarohana. Teknolojia nihatsara satria nanorina MusicLab izahay tamin'ny 2004, ary ho mora kokoa ny hanao fanandramana toy izany ankehitriny. Nefa, avo paikady vidiny raikitra dia tena ihany no azo atao ho an'ny mpikaroka izay afaka toa handrakotra ireo vola lany.
Ho famaranana, Hafanàm-po an fanandramana afaka manana vola be rafitra hafa noho ny Analog fanandramana. Raha te-hihazakazaka fanandramana tena lehibe, dia tokony hiezaka mba hampihenana ny vola miovaova araka izay azo atao, ary tena tsara ny lalana rehetra ho 0. Afaka manao izany amin'ny alalan'ny automating ny haihetsika ny andrana (ohatra, fanoloana olona ny fotoana amin'ny solosaina ny fotoana) ary nanaovany fanandramana izay olona te ho ao. mpikaroka izay afaka mamaritra fanandramana amin'ny endri-javatra ireo, dia ho afaka hihazakazaka karazana andrana vaovao izay tsy azo atao tamin'ny lasa.